လူပြန်တော်များကို ကြိုဆိုကြ | ဧရာဝတီ
ဝီရသူ (မစိုးရိမ်)| May 28, 2012 | Hits:16,777
22 | | စာရေးသူ လူ့ပြည်ပြန်ရောက်မှ နာမည်ကျော်ရဟန်းပျိုများ လူပြန်တော်ဘဝသို့ ကူးပြောင်းသွားသည်မှာ ၂ ပါးပင်ရှိလေပြီ။ ၂ ပါးစလုံး ထင်ရှားကျော်ကြားသူများပင် ဖြစ်ပေသည်။ တပါးက နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာ ထင်ရှားသူဖြစ်ပြီး ကျန်တပါးမှာ သာသနာလောက၌ ထင်ရှားသူဖြစ်လေသည်။ နိုင်ငံကျော် ကမ္ဘာကျော် ဆရာတော်လေးများ ဖြစ်ကြ၏။
၂၀၁၂ ခု ဇန်နဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့က အကျဉ်းစံဘဝမှ ပြန်လွတ်လာသော အရှင်ဂမ္ဘီရ (ဓာတ်ပုံ-ဧရာဝတီ)
ဦးဂမ္ဘီရနှင့် လူချင်းမတွေ့ဆုံဖူးသော်လည်း အိုးဘိုထောင်မှာ နေရစဉ်တွင် အဆက် အသွယ်ရှိခဲ့ပေသည်။ မိမိက ရှေးဦးစွာရောက်နှင့်နေသော ကျောင်းသားဟောင်းကြီးဖြစ်သောကြောင့် သတင်းကြားသည်နှင့် လှမ်း၍ဆက်သွယ်ကာ မိတ်ဆက်စာပေး၍ အားပေးစကား ပြောခဲ့ဖူး၏။ အကြော်အလှော်များလည်း လှူလိုက်ပါ၏။ ဦးဂမ္ဘီရထံမှ ပြန်စာရခဲ့ပါ၏။ ၂၀၀၂-အင်းစိန်ရွာမမှာ “အမြဲရှုံးနေသော ဘောလုံးပွဲ” ဟောစဉ်က သူဟာ အကြီးတန်းသင်တန်းသားအဖြစ် တရားနာခဲ့ရကြောင်း၊ ဓာတ်ပုံကင်မရာဖြင့် မှတ်တမ်းတင်သည့် ဦးဇင်းတပါးမှာ သူသာဖြစ်ကြောင်း ပါဝင်လေ၏။ စာနှင့်အတူ ပျားရည်တဗူးလည်း ပါလာလေသည်။ တပည့်လည်းဖြစ်၊ ကပ္ပိယလည်းဖြစ်သူ အတူနေ မောင်ကြေးရုပ်ကား “ဂမ္ဘီရပျားရည်” ဟု အမည်ပေးလေသည်။
ဦးဂမ္ဘီရလှူလိုက်သောပျားရည် ဖြစ်သောကြောင့် ထိုကဲ့သို့ နာမည်ပေးခြင်းဖြစ်၏။ “ဂမ္ဘီရပျားရည်” လျော့သွားလျင် တခြားပျားရည်နှင့် ရောကာ “ပွား”ထားပြန်၏။ ညနေတိုင်း ဆရာတော် “ဂမ္ဘီရပျားရည်” ဘုရားဟု ဆိုကာ ကပ်ရှာလေတော့၏။ ဦးဂမ္ဘီရကို ထိုသို့ပင် လေးစားကြည်ညိုကြလေသည်။
ဆက်လက်၍ ၎င်းစာထဲ၌ ငွေကြေးကိစ္စများကြောင့် သိက္ခာချထားခဲ့ရကြောင်း၊ ရဟန်းတပါး မဟုတ်တော့ကြောင်းလည်း ပါဝင်လေသည်။ သူ့စာဖတ်ရသူတိုင်းက “စိတ်ပုံမှန် မရှိတော့ကြောင်း” ကောက်ချက်ချကြ၏။ ဆက်လက်စုံစမ်းကြည့်ရာ စစ်ကြောရေးကာလမှာ “စရဖ” (စစ်ဖက်ရေးရာ လုံခြုံရေးအဖွဲ့) ၏ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို အလူးအလဲ ခံခဲ့ရကြောင်း၊ အသက်ကငယ်ငယ် လောကဓံက ကြီးကြီး ဖြစ်နေသောကြောင့် လည်းကောင်း၊ တပါးတည်းနေရသည့် နေ့ရက်များကို ဖြတ်သန်းရ ခက်ခဲသောကြောင့်လည်းကောင်း စိတ်ကျန်းမာရေး မကောင်းတော့ဟု သိရပြန်ပါသည်။
စာရေးသူက တရားအားထုတ်ဖို့ ဆန္ဒပြုလိုက်၏။ တရားအားမထုတ်ဖူးကြောင်းနှင့် အလုပ်ပေးတရား စာအုပ်များရှိက ပို့ပေးပါရန် စာပြန်သဖြင့် မဟာစည်ဆရာတော်ကြီး၏ “ဝိပဿနာရှုနည်းကျမ်း” စာအုပ်လေးကို ပို့ပေးလိုက်၏။ အသက်ကငယ်ငယ်၊ အတွေ့အကြုံကနုနု၊ စိတ်ဓာတ်က ပြင်းပြင်း၊ သမာဓိအလုပ်က နည်းနည်းဖြစ်နေ၍ အမြဲတမ်း တယောက်တည်းပေါက်ကွဲနေပုံ ရလေသည်။ မကြာခဏ သူ့အကြောင်းသာ ကြားနေရလေ၏။
သိပ်မကြာလိုက်ပါ။ ဦးဂမ္ဘီရ အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြသံ ကြားရပါတော့၏။ “ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး ဒို့အရေး” အော်သည်။ “နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး ဒို့အရေး” လည်း ကြွေးကြော်သည်။ တခြား နိုင်ငံရေးနှင့် ပတ်သက်သမျှလည်း အော်ဟစ်တောင်းဆိုသည်ဟု ကြားရ၏။
ယုံကြည်ချက်က မြင့်မား၊ ခံယူချက်က ပြင်းထန်လွန်း၍ ထင်သည်။ ထောင်ကချော့မော့၍ ကျွေးသည်ကိုပင် လုံးဝမစား၊ ထောင်မှူးကိုယ်တိုင် ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပြီး ကျွေးသည်ကိုလည်း တို့ထိ၍ပင် မကြည့်ပေ။ နေ့ရောညပါ ဝန်ထမ်းများ အလှည့်ကျစနစ်ဖြင့် စောင့်ကြပ်အိပ်ကြရ၏။ တဆင့် ကြားသိရသည်မှာ ဦးဂမ္ဘီရသည် “ရေလည်း လုံးဝမသောက်” ဟု ဆို၏။ အစားမစား ရေမသောက်ဘဲ သုံးရက်တိတိနေသော်လည်း ကျန်းမာရေးက ကောင်းနေဆဲ။ ကြွေးကြော်သံများ အော်နိုင်ဆဲ။ စိတ်အားတက်ကြွ စွာ လက်သီးလက်မောင်း တန်းနိုင်ဆဲပင် ရှိနေသေး၏။
မိမိသည် သတင်းရလျှင် ရချင်း၊ ရွှေမောင်အိမ်သို့ သတင်းပို့လိုက်၏။ ကံကောင်းသည်ဟု ဆိုရမည်လော မသိ။ ရွှေမောင်အိမ်၌ ဦးဂမ္ဘီရ၏ မိသားစုရောက်နေလေသည်။ ညရောက်သည့်အခါ မယ်တော်ဒေါ်ရေးက ဆော်ကြွေးလေတော့၏။ ဦးဂမ္ဘီရ၏ တောင်းဆိုမှုက မြင့်မားလွန်းနေ၍ အစိုးရက လိုက်လျောမည့်ပုံ လုံးဝမရှိသည်ကို တွေ့ရ၏။ မဖြစ်နိုင်သည်ကို တောင်းဆိုရင်း အသက်တခု အဆုံးရှုံးမခံနိုင်သောကြောင့် တိုက်ရုံးသို့ သွားကာ အရာရှိနှင့် တွေ့ဆုံလိုက်၏။ “ဦးဂမ္ဘီရနှင့် တွေ့ခွင့်ပေးပါ၊ အစာပြန် စားအောင် ပြောပေးပါ့မယ်” ဟု တင်ပြခဲ့၏။ မိမိက ညနေအချိန်မှာ တောင်းဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်၏။ တိုက်ဆိုင်သည်လော မပြောတတ် နောက်တနေ့မနက် ထောင်ဖွင့်သည်နှင့် “ဦးဂမ္ဘီရ ထောင်ပြောင်းသွားကြောင်း” သိလိုက်ရပေတော့၏။
လူချင်းမဆုံသလို မူချင်းလည်း မဆုံနိုင်တော့ပြီ
၎င်းနောက် သူ့သတင်းတွေက အတော်စုံသည်။ ခန္တီးထောင်ရောက်သွားပြီဟု လည်းကောင်း၊ ကလေးထောင် ပြောင်းရပြန်ပြီ ဟူ၍လည်းကောင်း၊ ကလေးထောင်မှာ ဘာသံကြားရပြန်သည် ဟူ၍လည်းကောင်း၊ စုံ၍စုံ၍ နေပေတော့၏။ ဤသို့ဖြင့် ၂၀၁၂ ခု ဇန်နဝါရီ လ ၁၃ ရက်နေ့တွင် မိမိတို့ လူ့ပြည်သို့ အတူပြန်ရောက်ကြ၏။ ထို့နောက်များမကြာမီ ဦးဂမ္ဘီရက ဖုန်းနံပတ်မေးခိုင်း၍ ဟုဆိုကာ မေးလာကြ၏။ သို့သော် ယခုချိန်ထိ တခါမျှ မဆက်သွယ်ခဲ့ပါ။
ချိပ်ခွာ သတင်းတွေကြားရသည်။ ကမ္ဘာအေး သတင်းတွေ ကြားရသည်။ ပြန်ခေါ်ပြန်ထိမ်း သတင်းတွေ ကြားရသည်။ DVB ထဲမှာလည်း ရုပ်သံ မြင်ကြားရပြန်၏။ မဂ္ဂင်ကျောင်းကိစ္စ ဒေါနှင့်မောနှင့် ပြောဆိုနေပုံများဖြစ်၏။
စာရေးသူနှင့် အမြင်ချင်း မတူရုံတင် မဟုတ်တော့ဘဲ သူ့လုပ်ရပ်ကြောင့် “ကမ္ဘာအေးဆရာတော်ကြီးများနှင့် ပြည်သူလူထု၊ သံဃာထုတို့ အကုသိုလ်တိုးပွား အပြစ်ဆိုးဝါးလာမည့်အရေးကို တွေးပူနေချိန်တွင်” ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ဦးဂမ္ဘီရ လုပ်ရပ်အပေါ် ဝီရသူ၏ သဘောထားကို မကြာခဏ မေးမြန်းလာကြသဖြင့် “ဝီရသူ သဘောထား” ထုတ်ပြန်ကာ ထောက်ခံထိုက်သည့်အချက်ကို ထောက်ခံ၍ ရှုတ်ချထိုက်သည့်အချက်ကို ရှုတ်ချခဲ့ပေသည်။ ထိုအခါ စာရေးသူအားလည်း ထောက်ခံကြ ရှုတ်ချကြနှင့် ကောင်းကင်တိုက်ပွဲ ဆင်နွဲမိလျက်သား ဖြစ်နေကြ၏။ ပျော်စရာလည်း ကောင်းသည်ပင်။
တနေ့ စာရေးသူ အင်တာနက် အသုံးပြုနေစဉ် ဒကာတဦးက မက်ဆေ့ခ်ျ ပို့လာ၏။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးမှ ဖြစ်မည်ထင်သည်။ Myanmar Express ဆိုဒ်ပါ ဦးဂမ္ဘီရသတင်း ဖြစ်၏။ သင်္ကန်းလဲပုံ ခေါင်းကွဲပုံများ စုံလင်လေသည်။ Comment ပေးထားသူများမှ တချို့စာများမှာ လွန်စွာ ကြမ်းတမ်းရိုင်းပျသည်ကို တွေ့ရပေသည်။နောက်ဆုံး၌ ဦးဂမ္ဘီရ လူဝတ်လဲသည့် သတင်းကြားရ၏။ ကျန်းမာရေး မကောင်းသောကြောင့်ဟု သိရ၏။ စိတ်ကျန်းမာရေးကို ဆိုလိုပုံရ၏။ နိုင်ငံရေးလောက၌ မြန်မာမှာသာမက ကမ္ဘာမှာပါ ထင်ရှားကျော်ကြားသည့် နိုင်ငံ့သားကောင်းတပါး (ရဟန်းဘဝမှ လူ့ဘဝသို့) ဘဝပြောင်းသွားခဲ့ပေပြီတကား။
အောင်မြင်ကျော်ကြား ရဟန်းတော်တပါး လူဝတ်လဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ နှမြောကြသည် ဖြစ်စေ၊ သနားကြသည် ဖြစ်စေ၊ စိတ်မဆိုးကြသည် ဖြစ်စေ၊ ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင် အောင်ပွဲခံကြသည် ဖြစ်စေ၊ မည်သူက မည်သို့ပင် စိတ်ခံစားကြစေကာမူ၊ ထိုအရာများကို အလေးဂရုမပြုဘဲ လူထွက်ရဲသော ရဟန်းတော်များကို ချီးကျူးရမည် ဖြစ်ပေသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ သာသနာတော်၌ လူထွက်ထိုက်သော အပြစ်များကျူးလွန်ထားပါလျက် လူမထွက်ဘဲ အောင်းပြီးမှိန်းနေကြသူများ ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့သည် သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရဟန်းမဟုတ်တော့မှန်း သိပါသော်လည်း ပရိသတ်ကို ဆက်ဆံရာ၌ ဘာကောင်ကြီးလိုလို၊ ညာကောင်ကြီးလိုလို အကောင်ကြီးထင်အောင် ခပ်တည်တည်ဖြင့် အကောင်လုပ်နေတတ် ကြပေသည်။ ထိုသို့ အောင်းပြီး အကောင်လုပ်နေသူများကို “အောင်းကောင်” ကြီးများဟု ခေါ်ပါသည်။ လူလည်းမထွက်ရဲ၊ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရမည်ကိုလည်း ကြောက်လန့်နေပြီး၊ ရဟန်းသီလကိုလည်း မစောင့်ထိန်းချင်ဘဲ အချောင်စား အောင်းကောင်းကြီးများ ဖြစ်ပါ၏။
ထိုအောင်းကောင်ကြီးများ သာသနာတော်၌ ရှိနေသောအားဖြင့် သာသနာလည်း အကျိုးမများ၊ ကာယကံရှင် ကိုယ်တိုင်လည်း အကျိုးမများ၊ တပည့် ဒကာ ဒကာမများလည်း အကျိုးမများပေ။ ၎င်းတို့သည် နေ့စဉ် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ငရဲပေးနေသကဲ့သို့ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်လည်း နေ့စဉ် ငရဲလိုင်စင်ယူခြင်း၊ ငရဲသက်တမ်းတိုးခြင်းများ ပြုလုပ်နေပြီးသား ဖြစ်ပေသည်။ သာသနာ့အမှိုက် သာသနာ့ အညစ်အကြေးများ ဖြစ်ပါ၏။
ရှုတ်ချထိုက်သူမှာ ထိုအောင်းကောင်ကြီးများ ဖြစ်ပေသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် DNA နည်း၊ CID နည်းတို့ဖြင့် သန့်ရှင်းပစ်ရမည် သာဖြစ်ပါသည်။
လူဝတ်လဲလျှင် လက်ညှိုးထိုးခံရမည်ကို သိပါလျက်၊ တံတွေးကွက်ထဲ ပက်လက်မျောရတော့မည်ကို သိပါလျက်၊ ဆင်းရဲချို့တဲ့ နိမ့်ကျစွာ နေထိုင်ရတော့မည်ကို သိပါလျက်၊ အောင်းကောင်ကြီးများလို အောင်းမနေကြဘဲ လာမည့်ဘေးပြေးတွေ့ကာ လောကဓံကို ရင်ဆိုင်ရဲသည့်သတ္တိဖြင့် လူဝတ်လဲသူများသည် ဧရာမသတ္တိခဲကြီးများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ထိုသတ္တိခဲများသည် အောင်းကောင်ကြီးများလို တဘဝတနပ်စာ အတွက်သာ ကွက်ကြည့်သူများ မဟုတ်ဘဲ သံသရာဘေးကို မျှော်တွေးကာ လက်ရှိ အခွင့်အရေးများကို စတေးဝံ့သူများ ဖြစ်ပါသည်။ ဤအချက်တခုတည်းနှင့်ပင် ၎င်းတို့၏ သိက္ခာသမာဓိကို လေးစားဖွယ် ကောင်းနေပေတော့၏။
မပျော်၍ လူထွက်သည်ကို ဘုရားမရှုတ်ချပါ။ မထိုက်တန်ဘဲ အပူဇော်ခံနေသည့် ဒုဿီလများကိုသာ ဘုရားရှုတ်ချခဲ့ပါသည်။ (အဂ္ဂိက္ခန္ဓောပမသုတ်၊ ဥပေါသထ သုတ်တို့ သက်သေတည်နေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။)
စာရေးသူတို့ ပြည်သူအများစုသည် ဘုန်းကြီးတပါးလူထွက်ပြီဆိုလျှင် မေးငေါ့ကြ၏။ ကဲ့ရဲ့ကြ၏။ လက်ညှိုးထိုးကြ၏။ ရှုတ်ချကြ၏။ အပြစ်တင်ကြ၏။ ဤသည်မှာ ရိုးရာတခုလို ဖြစ်နေပေသည်။
“ကိုရင်ဝတ်စဉ် ရဟန်းခံစဉ်က သံသရာဝဋ်ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်ပါရခြင်း အကျိုးငှာ” သာ ရွတ်ဆိုခဲ့ရပေသည်။ ရှင်ရဟန်းဘဝဖြင့် သာသနာ့ဘောင်မှာ တသက်ပတ်လုံး ပျော်ရွှင်စွာနေပါ့မည်ဟု မည်သူတဦးတယောက်မျှ အာမခံခြင်း၊ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း၊ ဝန်ခံကတိလက်မှတ် ထိုးခြင်းမျိုးလုံးဝ မရှိပါ။ မပျော်၍ ထွက်ခြင်းအတွက် လက်ညှိုးထိုး အပြစ်တင်စရာမလိုပါ။ မနေနိုင်လျှင် မည်သူမဆို ထွက်ခွင့်ရှိသူသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဘုရားလက်ထက်တော်တုန်းကလည်း အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် လူထွက်သွားကြသည့် ဖြစ်ရပ်သာဓကများ များစွာရှိသည်ကိုလည်း သတိမူရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤသာဓကများကြောင့် ရှေးရိုးစွဲ အဆိုးမြင်မှုများကို စွန့်လွှတ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
လူဝတ်လဲလာသော သာသနာမှာ မပျော်မွေ့ မနေနိုင်၍ လူ့ဘ၀သို့ ကူးပြောင်းလာသူများသည် ကျေးဇူးပြုနိုင်မည့်သူများ ဖြစ်ပါသည်။ ရပ်အကျိုး ရွာအကျိုး သယ်ပိုးကြဦးမည့် မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်များလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့၏ စပ်ကူးမတ်ကူးကာလ၌ တွေ့ကြုံရမည့် လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး စသည်တို့နှင့် ပတ်သက်သည့် ဒုက္ခ သုက္ခ အ၀၀ကို လက်တွဲခေါ်ယူခြင်း၊ ကူညီဖြေရှင်းခြင်းဖြင့် လူ့ဘောင်လောက အသစ်သို့ အလွယ်တကူ ၀င်ရောက်ခွင့် ပေးခြင်းသည်သာလျှင် သာသနာနှင့် လူမျိုးအတွက် ကောင်းသော စွမ်းသော ဆေးတခွက်ဖြစ်ပါကြောင်း တင်ပြအပ်ပါသည်။
အမေရိကန်၊ မြန်မာ၊ တရုတ် ဆက်ဆံရေးများ
16 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website war May 28, 2012 - 2:19 pm	ရိုသေစွာဖြင့် ဦးတင်ဦးခိုက်ပါတယ်ဘုရား။
ပြည်သူ့ အကျိုးအတွက် ရွက်ဆောင်ခဲ့တဲ့၊ ရွက်ဆောင်နေကြတဲ့ ရဟန်းသံဃာနဲ့ လူအပေါင်းတို့ ကို တပည့်တော်မ တို့ အမြဲ ကျေးဇူးသိလျှက်ပါဘုရား…
Reply	ရဟန်းတစ်ပါး May 28, 2012 - 11:51 pm	၀ီရသူ ၏ တစ်ချို့သော အမြင်များသည် သဘောကျ လက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိပါသည်။ တစ်ချို့သော အမြင်များမှာတော့ အစွန်းရောက်ကာ နည်းနည်း အူကြောင်ကြောင်နိုင်လွန်းပါသည်။ မြှောက်ပေးတိုင်း လုပ်တတ်တဲ့ အတန်းစားထဲ ၀ီရသူ ကို မပါစေချင်ပါ။
Reply	JJ Minami May 29, 2012 - 10:45 am	ဘုန်းကြီးအလုပ်မလုပ်တဲ့ဘုန်းကြီးကို ဘာမှကြည်ညိုနေစရာမရှိဘူး…နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားတယ်ဆိုတာ ရဟန်းအလုပ်မဟုတ်ဘူး….ဒေါသမောဟကင်းတဲ့ဘုရားသားတော်ခံယူပြီးတော့…ဒေါသတွေကြီးနေတဲ့ရဟန်း..အဲဒါရဟန်းမှမဟုတ်တာ…စော်ရီးပါ..အဲလိုရဟန်းမျိုးကို ကိုးကွယ်ဖို့မပြောနဲ့…လမ်းတွေ့တောင် ဦးမချဘူး
Reply	ကောင်းအောင်ကြီး May 29, 2012 - 10:51 am	ဦးဇင်းဘု၇ား
တပည်.တော်တို. နိုင်ငံကလည်း အောင်းကောင်ကြီးတွေ နဲ. သောင်းအောင်ကြီးတွေ တော်တော်ကြီးစိုးလှပါဘု၇ား။
Reply	ကောင်းအောင်ကြီး May 29, 2012 - 11:00 am	မင်းဦးမချချင်နေပေါ.။
Reply	ဓမ္မ၀ါဒီ May 30, 2012 - 12:32 pm	၀ီရသူ အတိတ်က လုပ်ရပ်တွေက လွန်စွာတစ်ဖက်စွန်းရောက်ပါသည်။ သတ္တိရှိတာ မတရားမှုကို ဆန့်ကျင်တာကို လေးစားပါသည်။ဒါပေမဲ့ သတိတရားလက်ကိုင်ထားပြီး ချင့်ချင့်ချိန်ချိန်လုပ်ပါလို့ ဘုန်းကြီးကို စာချလိုက်ပါသည်။
Reply	Kyaw Thu Tun June 1, 2012 - 3:23 pm	ဆရာတော် ၀ီရသူလို သံဃာတော်များကို တပည့်တော် ဘုရားနှင့်တစ်ဂိုဏ်းတည်းထားပြီး ရိုသေစွာ ကန့်တော့ပါသည် ဘုရား။ ဆရာတော်ဟာ ဘာသာရေးမှာကော၊ နိုင်ငံရေးမှာကော၊ လူသားအရေးမှာကော၊ သံဃာအရေးမှာပါ အမှန်တရားဘက်ကပဲ ရဲရဲတောက်အမြဲတမ်းနေခဲ့တဲ့သံဃာတော်တပါးပါ။ ဘုရားကလည်း အမှန်တရားကို ရဲရဲဝံ့ဝံ့ရှာ၊လူတွေအတွက် အမှန်တရားကိုချပြ၊ သူကိုယ်တိုင်လည်းအမှန်တရားနဲ့နေခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံရေးဆိုတာ အမှန်တရားအရေး၊ လူသားအရေးပါပဲ။ ဘုရားတောင်မှ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။(မှတ်ချက်။ ။ဘာသာရေးများလည်း အမှန်တရားနှင့် မဝေးစေချင်ပါ။)
Reply	aumi June 5, 2012 - 10:47 am	စိတ်နှလုံးအေးချမ်းချင်လို့ အေးငြိမ်းရာအမှန်ကိုလမ်းညွှန်နိုင် လက်တွေ့ကျင့်သုံးနိုင်လို့ ဗုဒ္ဒဘာသာကို ကိုးကွယ်တာပါ။ နိုင်ငံရေးလူမှုရေး(လောကီကိစ္စ)တွေ ဆိုရင် နိုင်ငံရေးသမားနဲ့ လောကဓမ္မဆရာတွေကိုချည်းကပ်မှာပါ။ သံဃာတွေဆီချည်းကပ်ရင် လောဘ၊ဒေါသ၊မောတွေငြိမ်းချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့သံဃာတွေ ဆီချည်းကပ်ရင် လောင်မြိုက်တရားတွေပဲသူတို့ဆီကနေ အပူကူးစက်ခံရတယ်။ ဖြစ်ချင်တဲ့လောဘ၊ မဖြစ်ချင်တဲ့ဒေါသ၊ တွေဝေမိုက်မဲ (ဓမ္မသစ္စာကိုမသိခြင်းကြောင့်)တဲ့မောဟတွေပဲရလာရတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုတောင် နိုင်အောင်ထိန်းချုပ်ဖို့ ခက်တဲ့လူ့လောကမှာ သူများတွေကို ကိုယ်ဖြစ်စေချင်သဖြစ်ဖို့ လုပ်ရတဲ့လောကီရေး(နိုင်ငံရေး၊လူမှုရေး)ကိစ္စတွေကို သံဃာတွေကလုပ်နေကြရင် သံဃာတွေကိုယ်တိုင် မအေးချမ်းနိုင်တဲ့ဗုဒ္ဒဘာသာဟာ…..???။
Reply	aumi June 5, 2012 - 11:00 am	လောဘဒေါသမောဟကင်းစင်အောင်ညွန်ကြားပြသနိုင်တဲ့သံဃာများကိုသာဖူးတွေချင်ပါတယ်။ လောဘဒေါသမောဟတိုးပွါးစေတဲ့သံဃာတွေကိုမကြုံလိုပါ။ လောဘဒေါသမောဟများတဲ့လူ တွေဘယ်ဘာသာတရားက အမှန်အေးချမ်းစေနိုင်ပါသလဲ။ သံဃာတွေတောင်မှကိုယ်ကိုယ်ကို မအေးချမ်းနိုင်ပဲ လောကီသားတွေလိုစောင်းမြောင်းပူပင်နေရင် ဒေါသတရားတွေပွါးနေကြရင်၊ ….???
Reply	Kyaw Thu Tun June 6, 2012 - 5:08 pm	aumi အတွက်ပါ။
မြတ်စွာဘုရားဟာ တန်ခိုးရှင် မဟုတ်ပါ။ လူသားစင်စစ် ဧကန်ဖြစ်ခဲ့ရာမှ လောကလူသားတွေအတွက် ဒုက္ခမှလွတ်မြောက်ရာလွတ်မြောက်ကြောင်းတရား(သို့) သစ္စာတရား(သို့) အမှန်တရားကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့လို့ လောကလူသားတွေရဲ့ ခေါင်းဆောင် ဆရာ ဘုရားအဖြစ် ရောက်ခဲ့တာပါ။ ဒုက္ခဖြစ်ရာဖြစ်ကြောင်းကိုသိမှ လွတ်ရာလွတ်ကြောင်းကိုသိမှာပါ။
ဘာမှမသိပဲနဲ့ ငြိမ်းအေးချင်တယ်ဆိုရင် တန်ခိုးရှင်ဘုရားတွေကို နတ်တွေကို ရှာကိုးကွယ်ပါ။
Reply	aumi June 8, 2012 - 11:21 am	kyaw Thu Tun အတွက်ပါ။
ှုငြိမ်းအေးချင်ရင် ဘုန်းကြီးတွေကိုမကိုးကွယ်နဲ့၊ လို့ဆိုချင်တာများလား?
Reply	aumi June 8, 2012 - 11:34 am	Kyaw Thu Tun အတွက်
လူ့ဘောင်လူ့ဘ၀ဟာ လောဘ၊ဒေါသ၊မောဟ တွေနဲ့မကင်းပါ၊ နဲတာနဲ့များတာဘဲကွာမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလောကီ(လူ့ဘောင်)ရေးတွေကို ငြီးငွေ့လို့ လူဝတ်ကြောင်ကိုစွန့်ပြီး ဘုန်းကြီးရဟန်းပြုကြတာမဟုတ်လား။ ရဟန်းတပါးထံချည်းကပ်လို့မှ ကိလေသာအပူငြိမ်းကြောင်းတွေမကြားရဘဲ ဒေါသဖြစ်စရာ၊လောဘတက်စရာ၊မောဟဖြစ်စရာတွေသာဖြစ်လာရင် အဲဒီအခြေအနေကို ကို ကျော်သူထွန်းဘယ်လိုပြောမလဲ?
Reply	ကောင်းစေချင် June 10, 2012 - 1:02 am	ကျော်သူထွန်း၊တော်တော်အပူတွေသွန်းမယ့်သူပဲ၊
ကြိုက်နေတာ သံဃာစစ်သံဃာမှန်တွေကို လျှောက်ထားကြည့်ပါ၊ဘုန်းကြီးနိုင်ငံရေးလုပ်တာ
Reply	Kyaw Thu Tun June 10, 2012 - 7:23 pm	aumi ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အခုလိုယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးနဲ့ ပြန်ပြီးဆွေးနွေးပေးတဲ့ အတွက်ပါ။ aumi ရဲ့မေးခွန်းတွေအတွက်လည်း မေးခွန်းတွေကိုပဲ ပြန်စဉ်းစားရင်းနဲ့ aumi ပိုတိုးတက်လာမယ်ထင်ပါတယ်။ဘုရားဟောခဲ့တဲ့စကားကို ဆရာတော်တွေဟောတာက မိမိကိုယ်သာ ကိုးကွယ်ရာတဲ့။
သူငယ်ချင်းနောက်တစ်ယောက် ကောင်းစေချင် ကတော့ ရန်ထောင်တယ်ခင်ဗျ။ ကောင်းစေချင်ကို တောင်းပန်ပါတယ်။ ခင်ဗျား အတွက် ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးအခေါ်ဟာ မှားသွားပါတယ်။
Reply	Ardamlay August 8, 2012 - 10:19 am	ပြဿနာမဟုတ်တာကိုပြဿနာလုပ်ပြီးဆွေးနွေးစရာမလိုပါဘူး သူဖြစ်သူခံပဲ ကိုယ့်အလုပ်ကိုမသိတဲ့သူတွေကို ကိုယ်ကသိနေရင် သူတို့လိုကိုယ်မဖြစ်သေးဘူးလို့တွေးလိုက်ပေါ့။
Reply	Ardamlay August 8, 2012 - 10:23 am	If you discuss anymore ,you’re welcome in face book , you can join သစ်လွင်အောင်,user name , Come on friend withinaweek !
ရာဇ၀င်ထဲမှာ အလုပ်မဖြစ်သူတွေကို ထားခဲ့